မြစ်ဆုံ: ကမ္ဘာ.အလှဆုံးတံတားများသို. စိတ်ကူးများဖြင်. အလည်တစ်ခေါက်
ကမ္ဘာ.အလှဆုံးတံတားများသို. စိတ်ကူးများဖြင်. အလည်တစ်ခေါက်
တည်ဆောက်ထားသော အင်ဂျင်နီယာ ဗိသုကာ ပညာရှင်တို.၏ စွမ်းပကားကိုဖြင်. မချီးကျူးဘဲ မနေနိုင်ပါ။ တိုးတက်လာခဲ.သော နည်းပညာများမှာလည်း အံ.မခန်းပါဘဲလား။ ချောင်းတွေ မြစ်တွေသာ တံတားထိုးလို.ရမည်ဟုထင်ထားတာ မှားသွားပီ။ ပင်လယ်ပြင်တွေပါ တံတားတွေ ထိုးနိုင်လောက်အောင် ကြိုးစားလာခဲ.တာ ယခုဆို ပင်လယ်ကူးတံတားတွေပါ ထွက်ပေါ်လာပြီ ဖြစ်သည်။ လူသားတွေရဲ.စွမ်းအားတွေကတော. အံ.မခန်းပါပင်။ ရုရှားနိုင်ငံ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းမြို.တစ်မြို. ဖြစ်သော စိန်.ပီတာစပါတ် မြို.တွင်ရှိသည်. တံတားတစ်စင်းသည် ညပိုင်းတွင် တံတားပေါ်မှ ဖြတ်ကူး၍ မရနိုင်ပေ။ ပင်လယ်ကူးသဘောင်္များ ဖြတ်သန်းနိုင်အောင် ညပိုင်းတွင် တံတားအား ခါးအလည်မှနေ၍ အပေါ်သို.ပင်.ထားနိုင်အောင် စီမံထားသည်။ အင်္ဂလန်တွင်လည်း ထိုကဲ.သို.သော တံတာမျိုး ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဦးပိန်တံတားသည်လည်း ကျော်ကြားသော တံတားများထည်းတွင် ပါရှိပါသည်။ မြန်မာလူမျိုး တို. ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် တစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ နောက်လာ နောက်သားများလည်း ထိန်းသိမ်းဖို.လိုအပ်ပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှ အံ.မခန်း လှပသော ၊ကြီးမားသော တံတားကြီးများဆီ သို. အားလပ်ရက်တွင် စိတ်ကူးများဖြင်. ရွက်လွှင်.ကြရအောင်။
Posted by မောင်မောင် at 19:57
5 November 2011 at 05:58